कसरी हराए पाकस्तानी पूर्व कर्णेल ? – Himalaya TV
Home » समाचार » कसरी हराए पाकस्तानी पूर्व कर्णेल ?
कसरी हराए पाकस्तानी पूर्व कर्णेल ?
२९ चैत्र २०७३, मंगलवार ०८:२४
काठमाण्डौ,२९ चैत्र । पाकिस्तानी सेनाका पूर्वलेफ्टिनेन्ट कर्णेल मुहम्मद हबिब जाहिर पाँच दिनदेखि बेपत्ता छन ।
२४ चैतमा ओमन एअरलाइनसको उडान नम्बर डब्लु वाई ०३३३१ बाट काठमाडौं ओर्लेका जाहिर भैरहवा पुगेपछि बेपत्ता भएका हुन । पाकिस्तानी राहदानी नम्बर एजे ५१२२९६४ वाहक उनी काठमाडौं ओर्लेलगत्तै बुद्ध एअरको उडानबाट त्यही दिन भैरहवा पुगेको र केही समयपछि बेपत्ता भएको पाकिस्तानी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सो पत्रसहित परराष्ट्रले गृहलाई २६ चैत्रमा पत्र पठाएर खोजी कार्यका लागि अनुरोध गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले लुम्बिनी आसपासमा उनको खोजी जारी राखेको जनाएको छ । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादबाट चार सय किलोमिटर पर फैसलावादको खाद्य उत्पादन कम्पनी रफान मेइजका उनी प्रमुख सुरक्षा अधिकृत थिए । अवकाश लिएलगत्तै उनले त्यहाँ जागिर सुरु गरेका थिए भने कमाइ पनि राम्रै थियाे । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा जागिरका लागि बेलायतबाट अफर आएपछि उनले त्यसकालागि मनस्थिति बनाए र अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं आएका थिए । सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनको ट्राभल लग हेर्दा पहिलो नेपाल भ्रमण थियो ।
डब्लुडब्लुडब्लु डट स्ट्रासोलुसन्स डट बिजबाट उनले जागिरको अफर आएको र अन्तर्वार्ता दिन काठमाडौं आएको सूचना उनको परिवारले उपलब्ध गराएको सुरक्षा स्रोतले बतायाे । लुम्बिनीस्थित राष्ट्रसंघीय लगानको कार्यालयमा मासिक तीन हजारभन्दा बढी डलर आम्दानी हुने आसमा उनी यहाँ आएका थिए । सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध सूचनाअनुसार उक्त कम्पनीको हवाला दिँदै बेलायती नागरिक बताउने मार्क थोम्सोनले ००४४ ७४५१२०३७२२ नम्बरबाट कर्णेल जाहिरलाई सम्पर्क गर्दै आएका थिए। अहिले त्यो नम्बरमा सम्पर्क हुँदैन । काठमाडौं अवतरण भएलगत्तै उनले मोबाइल नम्बर ९८१३८४८६८९ बाट पाकिस्तानमा श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। नेपाल रहुञ्जेल यही नम्बरमा सम्पर्क हुने बताएका थिए । ‘तर त्यसपछि उक्त नम्बर बन्द छ, उनकी श्रीमतीले भोलिपल्ट सम्पर्क गर्नखोज्दा सम्पर्क भएन’, पाकिस्तानी दूतावासले सरकारलाई पठाएको चिठीमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं अवतरणपछि उनलाई जावेद अन्सारी नामका व्यक्तिले विमानस्थलबाट रिसिभ गरेका थिए । पाकिस्तानी राजदूतले शनिबार नै मौखिक रूपमा र आइतबार लिखित रूपमा कर्णेलको खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।